မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Jungle Walk to Tree Top in Singapore
Posted by mabaydar at 11:08 PM
သွားချင်စရာလေးမို့ ရောက်ဖူးချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ စင်ကာပူလာရင် သွားစရာအဖြစ် မှတ်ထားပါ့မယ်။း)
12/28/2008 2:44 AM
Tree Top Walk ကိုတစ်ခါတော့ ရောက်ဖူးပါတယ်။ မျောက်တွေတော့ မှတ်မှတ်ရရ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်ကနေ အောက်ကို ငုံ့ကြည့်ရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်။
အော်.. ဒီပို့စ်ထဲမှာ မင်းသားမပါပဲ မင်းသမီး လေးယောက် ပါလား။ ဟီးဟီး။
ဗီဒီယို ရိုက်လာတယ်ဆိုတာ မပြဘူးလား မဗေဒါ
သွားမယ် သွားမယ်နဲ့ သွားကို မသွားဖြစ်သေးတာ။ ရောက်အောင်တော့ သွားဦးမယ်ဗျို့ ကျေးဇူး။
မောတာတော့တော်တော်လေးကိုမောပါတယ် ... ပျော်ဖို့လည်းအရမ်းကိုကောင်းတယ်...သေချာတာကတော့ ဘ၀ရဲ့အမှတ်တယနေ့ တွေထဲက ရက်လေးတစ်ရက်ဆိုတာပါပဲ... ဟိုတစ်ယောက်မျောက်နဲ့ထမင်းထုတ်တစ်ယောက်တစ်ဖက်
လုတာ ကတော့videoရိုက်ပြီး funniest moment လားtvမှာလာလာနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုတောင်ပို့လို့ရတယ်..
ရွှေဂျမ်းရေ.. ဘယ်ကလာမှာလဲမသိဘူး.. မြန်မာပြည်မှာတော့ ဒီလိုတောတောင်ကပေါလွန်းလို့.. ဒါမျိုးလွမ်းလောက်စရာမရှိပါဘူး..စလုံးမှာမရှိလို့ ရှိတဲ့ တောလမ်းသွားလျှောက်ရတာပါ..
လွိုင်လင်ရေ.. မဗေဒါကတော့ အောက်ငုံကြည့်တာ ခြေဖ၀ါးတွေယားလာတယ်.. မင်းသားကပါတယ်.. ကျမအဖေလေ.. မင်းသမီးက ၅ယောက်.. ကျမအမလဲပါတယ်.. သူတို့က ကင်မရာမန်းဖြစ်နေလို့ မပါတာ.ဗွီဒီယိုထဲရောက်မှကြည့်နော်..
စင်ဒန်လားရေ.. ဗွီဒီယိုက အက်ဒစ်လုပ်ရအုံးမှာလေ.. အမြန်ဆုံးတောင် ၁ပတ်လောက်တော့ ကြာမယ်..
Mr DBA.. သိပ်ခင်ပြီး စိတ်တူကိုယ်တူရှိတဲ့ သူတွေနဲ့သွားရင် ပိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်..
မြင်ရတာနဲ့တင် ပျော်စရာကောင်းမယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်...မဗေဒါရေ....
တစ်ခေါက်လောက်တော့ ရောက်ဖူးအောင် သွားလိုက်ဦးမယ်..
မဗေဒါတို့ကို မှတ်တောင်မမှတ်မိဘူး....မနည်းလူရုပ်ဖမ်းရတယ်.. (အဟီး..လူရုပ်မပေါက်ဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး)..မမှတ်မိဘူးလို့ပြောတာပါ..
မဗေဒါတို့သူငယ်ချင်းတစ်ဖွဲ့လုံး (မြန်မာပြည်က တစ်ယောက်ပါ)ကျန်းမာကြပါစေ...။
12/28/2008 2:05 PM
အမရေ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရီးလေးကို လာရောက် ခံစားသွားပါတယ်
12/28/2008 2:55 PM
12/28/2008 6:32 PM
ကောင်းလိုက်တာ...စာလေးနဲ့ ပုံဖော်လိုက်တော့ ပိုပြီး ရုပ်လုံးကြွလာတယ်...ကောင်းတယ်..နင့် ဘလော့ကိုကြိုက်တယ်...ချစ်သူဆန်ဒ(ပဆင့်တွေ
မရိုက်တတ်လို့ ..ဟဲ) ကိုသဘောကျတယ်... ကောင်းတယ်...ဖိုက်တင်း...
ပလန်ယူဘီး ကော ရောက်ဖူ: လား? စက်ဘီး စီ:လို့ရတယ်လေ
မရောက်ဖူးဘူး.. တစ်ခါတစ်ခါ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆုံပြီးထွက်ဖို့ကလဲ လွယ်တာဟုတ်ဘူးလေ.. သိတယ်ဟုတ်.. ဘယ်မှာရှိတာလဲ.. ဘယ်လိုသွားရတာတုံး. အင်္ဂလိပ်လိုစာလုံးဘယ်လိုပေါင်းလဲ..
12/29/2008 10:41 PM
Yes, itsaescape place inawild city.
the place where we can get natural sweat without gas attached.
butalittle (should i say very?:) ) tired trip indeed.
and the path seemsalittle long and nearly no shops to buy drinks and snacks :)
Anyway,agood trip for everyone in these city full with gas.
ပျော်စရာကြီး .. ဘယ်လိုသွားရလဲမသိဘူးနော်.. ရှာဖွေလေတွေ့ရှိလေ လုပ်ဦးမှ :D
3/12/2009 9:14 AM